Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda Midnimo/OYSU oo ku badisay 2-0
Kooxda Midnimo/OYSU oo ku badisay 2-0
Maalintii shalay oo Tariikhdu ku beegnayd 23/5/2012 waxaa ciyaar aad u wanaagsan ay dhexmartay Kooxda Midnimo FC ee OYSU Garissa iyo koox lagu magacaabo Hot Boys FC. Ciyaartan oo ahayd ciyaar in muda ah la sugayay aadna loo xiisaynayay ayaa waxay ku bilaabatay jawi wanaagsan oo xamaasad leh, iyadoo ay u soo daawasho tageen tageerayaal aad u tira badan oo labada dhinac ah.
Kooxda Midnimo ee OYSU-Garisaa ayaa si aad ah loo xiiseeyaa iyadoo ciyaar wanaag looga bartay iyo ismaqal, sumcad wanaagsan siisay kooxda. Ciyaarta oo xamaasad ku socotay ayaa ugu dambayntii waxay ku Dhamaatay 2:0 oo ay ku badisay Kooxda Midnimo FC ee OYSU Garissa. Waxaana goolasha u dhaliyay ciyaartoyga lagu magacaabo Daacad oo ahaa midka labada goolba u sixiixay kooxda OYSU Midnimo.
Waxaa goobta hadalo gaaban oo mahadcelin ah ka soo jeediyey masuuliin ka socday maamulka jaaliyada faraca Garissa oy ka mid ahaayeen Hogaanka Arimaha Bulshada OYSU ee Barica Africa Mudane Nimcaan Faysal iyo Hogaanka Arimaha Bulshada OYSU Garissa Maxamed C/Laahi. Waxaa kaloo goobta joogay Hogaanka HAAB OYSU heer calami Mudane Omar soya. Waxay dhamaantood ay balan ku qaadeen inay kor u qaadi doonaan kooxda Midnimo ee Sportiga, sameyna doonaan koooxa cusub oo ka ciyaari doona gobolkan Waqooyi Bari.
Gabagabadii dhalinyaradii oo aad u faraxsan ayaa goobta ka dareeray. Kooxda sportiga ee OYSU mahan markii oogu horaysay ee ay badiyaan waxay mar kasta ku guulaystaan abaalmarinada ama tartan kasta oo kubada cagta ah iyagoo hadda ka noqday magaalida Gaarissa koox si aad ah looga qadariyo, waxaana la rajeynayaa in ay dadaalkooda ka mid noqon doonaan kooxaha oogu caansan Kenya.